1. Ampangotrahina ny ronono.
2. Tetehina roa ilay lavanila ka ny ao anatiny no alaina. Atambatra amin’ilay ronono io dia arotsaka ao koa ny dibera
3. Mandritra izany fotoana izany dia afangaro ny siramamy sy ny atody ary ny lafarinina. Kapohina amin’ny “fouet”
4. Araraka moramora ny ronono no sady aroina amin’ilay fouet ihany. Tokony hahazo paty mitsiranoka sy tsy misy mivaingambaingana mihitsy, toy ireny paty hanaovana crepe ireny.
5. Rehefa vita dia avela hipetraka mandritra ny ora iray vao alefa ao ilay toaka ary afangaro tsara indray.
6. Hafanaina mandritra ny 10 minitra, eo amin’ny 250°C, ny lafaoro
7. Fenoina eo amin’ny 2/3 ireo lasitra hampiasaina. Raha ireny silicone ireny dia tsy mila asiana dibera akory.
8. Ampidirina ao anaty lafaoro mandritra ny 5 minitra, ka atao eo amin’ny 300°C ny hafanana. Tapitra io 5 minitra io dia ampidinina 180°C ny hafanan’ny lafaoro ary andrahoina mandritra ny ora iray. Arahi-maso matetika. Tokony hiloko volon-tsôkôlà matroka be ny ivelany fa ny ao anatiny kosa tokony hijanona halemy foana.
9. Avoaka avy ao anaty lasitra minitra vitsy, aorian’ny fahamasahany, dia apetraka ambony “grille”
Azo tehirizina ao anaty boaty vy ny « cannelés ». Ho an’ny lasitra indray, aleo kokoa mampiasa ireo vita amin’ny “silicone”, fa amin’iny mora esorina ny mofo, mora diovina ary betsaka ny mivarotra azy eto an-drenivohitra, raha mitaha amin’ireo lasitra vita amin’ny vy. Manomboka amin’ny 5.000Ar no ho miakatra ny vidiny.